Maareeye meel wanaagsan ayuu marayaa howlaha maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Maareeye meel wanaagsan ayuu marayaa howlaha maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
Wasiirka Warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo howlaha maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, isagoo ka dhawaajiyay in la dhisi doono inta aanu dhamaan sanadkan.
Maareeye ayaa sheegay in markii hore qorshuhu aha in bisha November la soo xulo ergooyinka iyo Baarlamaanka, si doorashada Madaxweynaha loo qabto, hase ahaatee ay dib u dhigeen murano iyo waxyaabo kale oo jiray.
Wasiir Maareeye ayaa sheegay in ka hor bisha December ay suuroobi doonto in Madaxweyne iyo Baarlamaan la doorto, waxaana uu rajo ka muujiyay sida ay iminka u socoto howsha.
Dhinaca kale Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay ka go’an tahay dhaqan gelinta qodobadii ka soo baxay shirka wada tashiga, waxaana uu xusay in la go’aansaday Guddiga howl fulinta iyo guddiga farsamada ay dhowaan u baxaan Gobolada, si ay kulamo wada tashi ula yeeshaan bulshada rayidka.
Kooxo hubeysan ayaa xalay ku toogtay afaafka hore ee Masjidka Jaamaca ee magaalada Cabduwaaq Mu’adinka masjidka